Umcwaningi wase-Centre for Quantum Technology yase-UKZN uDkt Uriri Solomon.
Umcwaningi wase-Centre for Quantum Technology uDkt Uriri Solomon ubeyingxenye yeqembu elinqobile kwi-Qiskit Hackathon Global esanda kuba khona, eyenziwe enkundleni yezokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje.
U-Solomon ubehlangene nabalingani bakhe baseMelika, eTunisia naseNdiya ngenkathi benqoba umncintiswano waphesheya ngethuluzi abalenzile lezinto zokuhlola ikhwanthamu ukuthi iphinde ikhiqizeke, ilandeleke futhi yabeke.
I-Qiskit iwuhlelo lwekhompyutha esetshenziswa kumakhompyutha ekhwanthamu akwa-IBM. Abaqhudelana kwi-hackathon bathole ithuba lokufunda ngezindlela ezintsha zokuphucula i-Qiskit, ukuhlangana nabacwaningi ngezindlela zobuchwepheshe besimanje, abenzi bomkhiqizo nokwakha ubudlelwano emphakathini wabantu be-Qiskit.
Lo mcimbi bekungowokuqala we-hackathon othathe imini nobusuku ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe owenziwe yi-Qiskit Community Team yakwa-IBM, lapho akade bekhona bekungabamenyiwe kuphela, ohlanganisa umphakathi wekhwanthamu izinsuku ezinhlanu obekukhona kuzona izinsuku ezine zokuqeqeshwa nezingxoxo zobuchule, kwavalwa nge-hackathon yemini nobusuku lapho amaqembu abathathu kuya kwabahlanu, abahlelwe ngokwekhono lawo ababebanga umklomelo wama-$1 000 umunye kanjalo nezindebe ezenzelwe i-Qiskit Community. Emaqenjini bekukhona abenzi, amafizisiti, ososayenzi bekhompyutha, abacwaningi nonjiniyela.
Lo mqhudelwano ovame ukuba sekomkhulu le-IBM e-New York kulo nyaka wenziwe enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje ngenxa yobhubhane i-COVID-19 kodwa abantu bakwazile ukuthola ithuba lokwazana nezifundiswa zaphesheya ezivelele kwezamakhompyutha ekhwanthamu embonini nasezikhungweni zemfundo ephakeme nakwezocwaningo.
U-Solomon ubengomunye wabangama-96 abakhethwe emanyuvesi ehlukene asemhlabeni nasemiqhudelwaneni yama-Qiskit Camp. Akade bekhona bebehamba nabantu ababacijayo abangama-23 basezinkampanini zamakhompyutha nasezikhungweni zocwaningo ne-IBM uqoobo.
Ethimbeni lika-Solomon bekukhona uMnu Iskandar Sitdikov waseMelika, umfundi owenza unyaka wokugcina kwezobunjiniyela bokuxhumana ngobuchwepheshe; uMnu Mohamed Yassine Ferjani wase-National School of Electronics and Telecommunications eTunisia; nomfundi owenza unyaka wesibili kwiziqu zokuqala uMnu Shashwat Shukla wase-Institute of Technology in India.
Ngokuqonda izinguquko ezenzeka ngokushesha emkhakheni wamakhompyutha kwezekhwanthamu, ithimba lika-Solomon lenze ithuluzi elikwazi ukuthi kulandeleke, kwabelaneke futhi kwenzike ucwaningo lwekhwanthamu ngendlela ehlanzekile neqondakala kalula ngabenzi bamakhompyutha, abacwaningi nezitshudeni. Loku bakwenze nge-QiskitFlow.
U-Solomon, owathola iziqu zobudokotela zokuba yifizisisti e-UKZN, iMasitazi kwiSayensi e-Rhodes University neziqu zokuqala neze-Onazi e-Delta State University eNigeria, wenza ucwaningo e-Centre for Quantum Technology oluthinta ukuxhumana kwezekhwanthamu, izindlela zocwaningo zekhwanthamu, i-quantum plasmonics ne-quantum metamaterials ne-quantum biosensing.